မှုခင်းမျိုးစုံကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဥပဒေများနှင့် တရားစီရင်ရေးအပေါ် မှီခိုအား? - Yangon Media Group
မှုခင်းမျိုးစုံကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဥပဒေများနှင့် တရားစီရင်ရေးအပေါ် မှီခိုအား?
အကြမ်းဖက်မှုအပါအဝင် မှုခင်းမျိုးစုံကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေများနှင့် တရားစီရင်ရေးစနစ်တို့ အပေါ်မှီခိုအားထားရုံဖြင့် မလုံလောက်တော့၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် အထူးအရေးကြီးကြောင်း ဒုသမ္မတ ဦး မြင့်ဆွေက ပြောသည်။
နေပြည်တော် သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၅၄)နှစ် မြောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွင် အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေများနှင့် တရားစီရင်ရေးစနစ် တို့အပေါ်တွင်သာ မှီခိုအားထား ခြင်းတစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက် တော့ဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍအပါအဝင် ပညာ ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အိုးအိမ်နေရာချထားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာ ဖွေရေးကဏ္ဍများ၊ မီဒီယာ၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးကလည်း ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်း အထူးအရေးကြီးလှပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မှုခင်းများပြားခြင်း၊ လျော့ နည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည့် အကြောင်း တရားများတွင် လူမှုရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများနှင့် နီးကပ်စွာဆက်နွှယ်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင်လည်း တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့၏ တားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ တရား စီရင်ရေးကဏ္ဍ၏ ဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာသာ အခြေပြုနေရုံဖြင့်မရဘဲ အခြား သော ကဏ္ဍများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လာကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်၊ ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ဝင်းဦးက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေ ဖြင့် အနာဂတ်ကာလတွင်လည်း စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ အမြဲမပြတ်ရှိ နေမည်ဖြစ်သဖြင့် အစဉ်သတိပြုပြီး အသင့်ဖြစ်နေအောင် ကြိုတင် စီမံဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၏ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေများကို မျက်ခြည်မပြတ်လေ့လာ သုံးသပ်ကာ နောင်ဖြစ်ပေါ် လာမည့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို မျှော်တွေးပြီး လစ်ဟာမှုမရှိအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းအပြင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့်ဥပဒေများကို အာဏာသက်ရောက်မှုရှိအောင် အရေးယူဆောင်ရွက်ရသည့် ဒီမိုကရေစီရဲလုပ်ငန်းကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ၏ အနစ်သာရမှာ ပြည်သူလူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သည့် ရဲလုပ်ငန်းစနစ်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ရန် ပြည်သူလူထုအမှန် တကယ်ပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
'' ဝါရင့် အနုပညာရှင်တွေနဲ့ အတူတူ တွဲလုပ်ရတာကိုက ညီမအတွက်တော့ စွန့်စားခန်းတစ်ခုပဲ'' ယဉ်လက်
ကွင်းသစ်ထက် စပါး၏ကစားပုံကိုအလေးထားကြောင်း ဒီဘရူနီ ဆို ၊ ပွဲဆက်များခြင်းကြောင့် ဖလားလေးလုံ